Ixabiso lamaxabiso okumisela iprojekthi epheleleyo yezityalo zerayisi
Mhlawumbi unombono wokuqala ishishini lokugaya irayisi, kodwa ingxaki ekukuphela kwayo kukuba kufuneka uphakamise imali yokuseta iRice mill yemveliso. Njengayo nayiphi na iprojekthi, iindleko zokuseka iprojekthi yokutyala imveliso yerayisi ixhomekeke kwizinto ezahlukeneyo. Ngaphandle komthamo, izinto ezahlukeneyo kubandakanya inqanaba le teknoloji, ezenzekelayo / ezingezizo ezenzekelayo, Impahla engekasilwa, abasebenzi abaqeshiweyo, ukupakisha, nabanye abaninzi banefuthe kwiindleko.
Kuyinyani ukuba uhlahlo-lwabiwo mali kufuneka lube yinto ephambili ekufuneka uyiqwalasele ukuba ujonge ukumisela iprojekthi yesityalo selayisi. Ngokuxhomekeke kuhlahlo-lwabiwo mali kuya kufuneka ucwangcise ukusebenza kweshishini lakho. Ukuba unohlahlo-lwabiwo mali olusebenzayo, Kuya kufuneka ucwangcise ukuthenga oomatshini ngokufanelekileyo. Uhlahlo-lwabiwo mali luxhomekeke kwizinto ezininzi ezifana,
Indawo yesityalo esirayisi
Ulwakhiwo lwezixhobo zanamhlanje okanye umatshini
Ubungakanani bemihla ngemihla
Nje ukuba uthathe isigqibo kuhlahlo-lwabiwo mali, Kuya kufuneka ukhangele iindawo apho ungathenga khona oomatshini abalungileyo beshishini lakho leerayisi. Ngoba?, awuzokwazi ukuqhuba ishishini ixesha elide. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba ukhathalele le nxalenye yeshishini lakho kanye ekuqaleni. Emva kokuba uziqwalasele zonke iingongoma ezichaziweyo, ekugqibeleni unokuseta umatshini weerayisi kwindawo oyithandayo.
I-VICTOR RICE MILL ibonelela ngeephothifoliyo ezibanzi zenkqubo enziwe,Isikhundla esiphezulu, amandla ombane agqibeleleyo wokugcina izityalo zerayisi- ukusuka ekuthatheni i-paddy ukuya kwimithwalo kunye neenkonzo ezikwindawo jikelele., ukucoca i-paddy, paddy / irayisi ukudlulisa, ukumiselwa kwangaphambili, ukuqunjelwa, ukwahlula-hlula, mhlophe / ucocekile, Ukuhlela, ipoli,Ukuhlelwa kombala, ukupakisha / ukupakisha njl.
I-VICTOR RICE MILLkey i-rosekey epheleleyo yembewu yerayisi inokunceda abasebenzisi kwezi ndlela zilandelayo:
1.Ukuncitshiswa kwenkunkuma nokuphinda kabini ngezinto ukuze ugcine utyalomali.
2.Ukuqinisekisa umgangatho weprojekthi,kubandakanya umgangatho womatshini ngamnye.
3.Ukucuthwa kwezidingo zolondolozo,inokugcina iindleko zomsebenzisi.
4.Ukusetyenziswa kwamandla okuncinci kunye nemveliso enkulu
5.Ulawulo oluhlanganisiweyo lobukrelekrele
6.Ukufakwa ngokukhawuleza kunye nokuqalisa, ukunciphisa kakhulu ixesha lokwakhiwa kweprojekthi yokugaya irayisi
Nxibelelana nathi Ukuseta iprojekthi yokutyala iirayisi epheleleyo